Gold Rush maka Top Ọkwa ngalaba | Martech Zone
Wednesday, July 25, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịnụbeghị mkpọtụ niile gbasara TLDs, ikekwe ị bụghị otu ijeri ụlọ ọrụ dollar (nke ahụ bụ mkparị). Onwe, m na-eleda eziokwu ahụ bụ na Njikwa Ịntanetị maka aha na aha ọnụ ọgụgụ (ICANN) etinyewo ha maka ire ere site na iru obere azụmaahịa ọ bụla. Ọ na-efu $ 185,000 itinye na $ 25,000 kwa afọ iji jigide omenala TLD. Nke a bụ oge mbụ, n'echiche m, ndị na-elekọta web weghaara ọchịchị onye kwuo uche ya na nnwere onwe ma na-abanye n'ụlọ iji nweta ego ngwa ngwa.
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ a, enwere ike iwebata ihe dịka 1,000 ngalaba ọhụrụ na ntanetị ntanetị. Ọ bụrụ na ịmee mgbakọ na mwepụ, nke ahụ karịrị nde $ 200 maka ICANN iji tinye ụfọdụ ndenye na nchekwa data. Ọ dịghị njọ. Nke a ozi sitere na Demandforce na-enyocha ngagharị maka ngalaba aha larịị na ihe nke a nwere ike ịpụta maka ọdịnihu nke ịntanetị.
Tags: domainngalabaicanụrụNkejingalaba ozo dị elu
Booshaka: Ghọta, Tinye ma bulie na Facebook
Jul 28, 2012 na 11: 59 AM
Ee, ọ dị ka enwere akara aka ole na ole na-egosi "slide" n'ụzọ ikpe ziri ezi n'ịntanetị.
Ọ bụghị ma ihe ijuanya ịhụ .app atop ndepụta !!! Ọdịnihu dị na ekwentị !!!